Ndebanye aha na inweta baajị maka oge opupu ihe ubi Canton 2020
Ndebanye aha nke Canton Fair na Inweta Baajị
Akwụkwọ ntuziaka ndị na -anọghị n'ịntanetị
Iji sonye na ntanetị Canton n'ịntanetị. Ndị Nchịkọta Buzụta Ọchịchị nke Weebụ nwere ike inyere gị aka.
Rịba ama: Ozi ndị a bụ maka naanị Canton Fair oge niile, ọ bụghị ihe ngosi 130 Canton!
Nanị ebe ị ga-enweta baajị azụ ahịa bụ Canton Fair Registration Offices (n'okpuru) - na mmadụ. Iji gbaa ume n'ịntanetị ndebanye aha ịzọpụta mmadụ niile oge, tupu aha nwere ike nweta ya site Express ọwa na ụlọ ọrụ ndebanye aha.
+ - Offlọ ọrụ na ndebanye aha Pịa ka ida
Inwere ike ịdebanye aha mgbe ị na-aga na Offlọ Ọrụ Ndebanye aha Buzụ ahịa 3 n'okpuru.
1. Uplọ ọrụ ndebanye aha guzobere na nkwado nke ụlọ nkwari akụ
2. Offlọ ọrụ na-edebanye aha ndebanye aha na ntọala China Mbubata na Mbupụ
Ọnọdụ ndebanye aha nke ndị si mba ofesi:
Oppositezọ na-abụghị nke Mpaghara A ọdịda anyanwụ
Oppositezọ na-abụghị nke Area B East
Lọ 16.1 Mpaghara C
3. Ọfịs ndebanye ahaziri ahaziri na Canton Fair Hong Kong Office Office
Adreesị: Xlọ 3106 - 3107, Office Tower, Mgbakọ Plaza, No.1 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong
Hotline Ọrụ Ndị Ahịa: (852) 2877 1318
Oge ọrụ: Mọnde ruo Fraịde 10 ruo 12:30 pm & 2 pm ruo 5 pm; Emechiri na Satọde, Sọnde na Ememe Ọha na Hong Kong
+ - Baajị inweta Express Channel maka ndị na-azụ ahịa ihe ntanetị n'ịntanetị na ọfịs ndenye aha Pịa ka ida
Ntinye ntinye aka na ntanetị ntanetị.
Akwụkwọ nkeonwe (Mpụga paspọtụ, ikike ikike ịlaghachi azụ nke HK / Macau, Asambodo Njem Kọmpi, Kọmpi Id dị ka Mpụga Chinese, ma ọ bụ akwụkwọ ikike ngafe nke afọ ofesi dị elu karịa otu afọ);
Ndị na-azụ ahịa etinyere tupu ha azụnye foto.
Enwere ike iji baajị mee ihe nke ọma maka ọtụtụ nnọkọ, itinye ngwa ọzọ n'ihi mfu ma ọ bụ ichefu ya ga-akwụ ụgwọ 200RMB, jiri nwayọ dobe ya.
Baajị ochie ahụ ga-aghọ nke na-abaghị uru ozugbo ị tinyegharịrị, biko hụ na baajị ị na-eyi bụ nke ọhụụ.
+ - Akwụkwọ Ndebanye aha Ndị Achọrọ Pịa ka ida
Ebe Ndebanye aha
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ ịkpọ oku / akwụkwọ ịkpọ oku
a. Mpempe akwụkwọ ịkpọ òkù akwụkwọ ma ọ bụ -kpọ oku nke Canton Fair nyere
b. Akwụkwọ nkeonwe (nkọwa ndị ọzọ, biko lee ihe edeturu)
c. Foto na-adịbeghị anya nwere ogo nke 5cm X 4cm
d. Kaadị aha
Mgbakwunye Mbubata na Mbupụ China ma ọ bụ na họtel ndị a họpụtara
-Ebido Online maka Badge
a. Mara maka ịnweta kaadị
c. Kaadị aha
Registrationlọ ọrụ na-ahụ maka ndebanye aha na China na mbubata na mbupụ ngosipụta zuru oke ma ọ bụ na họtel ndị a họpụtara
Ndị Zụrụ Akpọghị Invkù Ndị Canton Fair
Kaadị ozu ahia maka Canton Fair gara aga
Ndị Zụrụ Akpọghị Akwụkwọ
a. Akwụkwọ nkeonwe (nkọwa ndị ọzọ, biko lee ihe edeturu).
b. Foto na-adịbeghị anya nwere ogo nke 5cm X 4cm
d. Ụgwọ ọrụ
Ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ nnọchite anya nke Companylọ Ọrụ Ofesi na China
a. Mpempe akwụkwọ Asambodo Nzụmaahịa nke'slọ ọrụ nnọchiteanya nke mba ofesi na China
b. Kaadị NJ Were n’Ọrụ na Detuo
c. Foto nkeonwe ọhụụ
(Naanị otu onye nnọchi anya mpaghara ka akwadoro maka ụlọ ọrụ ọ bụla dị na mba ofesi, ndị ga-esonyere ya na mbinye aka nke ndị zụrụ ụlọ ọrụ ndị si mba ofesi)
Lọ ọrụ na-ahụ maka ndebanye aha na China Mbubata na Mbupụ Exact Fair
+ - Ihe Doucuments Pịa ka ida
Akwụkwọ nkeonwe. Gụnye paspọtụ esenidụt (ọ bụghị paspọtụ China), ikike nlọghachi ụlọ Hong Kong/ Macao ma ọ bụ Kaadị ID, Asambodo Njem Taiwan Compatriot, akwụkwọ dị mma maka ndị China si mba ofesi, ma ọ bụ paspọtụ ndị China nwere visa ọrụ esenidụt dị mma maka ihe karịrị otu afọ.
Foto nke onwe onye 5cm X 4cm (Ihe ngosi ahụ nwere ike ịse foto mgbe ị debanyere aha).
+ - Oge Ndebanye aha Pịa ka ida
Registrationlọ ọrụ na-ahụ maka ndị na-azụ ahịa na-ahụ maka ndị na-ere ahịa na China na ebubata ma na-ebubata ngosi ngosi ngosi:
N'oge opupu ihe ubi: Mee 1-4, 8: 30-18: 00 ， May 5, 8: 30-14: 00
N'oge mgbụsị akwụkwọ: Ọkt. 31-Nov.3, 8: 30-18: 00 ， Nov. 4, 8: 30-14: 00
Ofufe Ndebanye aha nke Registrationlọ Ọfịs na họtel ndị a họpụtara:
N'oge opupu ihe ubi: Apr. 30-May 1, 8: 30-18: 00; Mee 2, 8: 30-14: 00
N'oge mgbụsị akwụkwọ: Ọkt. Nov.30, 31: 8-30: 18
+ - Chart Usoro Ederede Pịa ka ida
+ - Ndụmọdụ maka Baajị Ntinye Pịa ka ida
Y’oburu n’inweta Kaadị IC Onye Asị, biko mee ka a mara na: Ntinye Ntinye (Kaadị IC) bara uru maka nnọkọ na-abịanụ nke Fair, nke na-azọpụta oge gị na ịnweta nnweta dị mfe. Ọ bụrụ n’ichezọ iweta Kaadị ahụ ma ọ bụ tufuo ya, ntinye ọzọ ga-efu gị 200RMB / kaadị dị ka ụgwọ ọrụ.
Zụta Kaadị bụ nanị ukara mbanye Fair na dị na China Import na Export Fair Mgbagwoju. Agbanyeghị, iji chekwaa oge gị ma mee ka ndebanye aha gị nwee ike ijikwa ya, anyị wepụtara ụlọ ọrụ ndebanye aha na 31 Overseas na Office ndị a họpụtara. Anyị na-atụ aro ka ị nweta akara baajị Canton Fair na ụlọ nkwari akụ 31 ndị a, na-atụle elekere ndebanye ndebanye aha na-eme n'elekere 9:30 nke ụtụtụ ruo etiti ehihie na China Import and Export Fair Complex. Ọ bụ ụzọ kachasị mma maka gị, maka ndị na-azụ ahịa na-anọ n'akụkụ ebe ndị a, biko denye aha na họtel.
Kaadi kaadị (baajị) bụ naanị nnabata gọọmentị na Canton Fair. Ọ dị irè maka ọtụtụ afọ ọtụtụ nnọkọ ngosi.
Kedu ka m ga-esi gaa
Canton Fair Ọnọdụ
Ndepụta nke usoro
Ndebanye aha mbụ na ntanetị
Hotelslọ nleta họpụtara
Hotelslọ nkwari akụ na-atụ aro
Amaghị nke ihe ngosi
Jeere ọtụtụ puku ndị ọchụnta ego ozi na afọ 16 gara aga